Manintsana tavy eo ambony seza
Azo atao tsara ny manintsana tavy na dia mipetraka eo ambony seza fotsiny aza. Toy izao no atao …
Manala ny tavy amin'ny sandry
Fihetsika tsotra dia hahafahana mandoro ireo tavy eo amin’ny sandry. Araho anie e !
Fitombenana miroraka, azo ampiakarina
Hampiakatra ny fitombenana somary niroraka ireto fampihetseham-batana ireto. Azo lazaina hoe :
Manala ny tavy amin’ny vatana ambony
Mora mahazo tavy koa ny tapany ambony amin’ny vatantsika vehivavy. Raha maniry hanintsana manokana ireo tavy ireo ianao dia ireto fampihetseham-batana ireto hatao.
Manintsana tavy ao an-trano
Fampihetseham-batana manintsana ny tavy amin’ny vatana manontolo indray no entina aminao anio. Mavitribitrika tsara araka izany rehefa manao ireto manaraka ireto.
Manala ny sisin-kibo
Mivoaka avy hatrany ny bika maha-vehivavy raha toa ka miala ny tavy amin'ny sisin'ny kibo, eo amin'ny andaniny roa amin'ny valahana sy ambanin'ny helika. Manala ireo tavy ireo indrindra ireto fampihetseham-batana telo manaraka ireto.
Manome endrika ny sandry sy ny nono
Faritra tena azo koloina ary tokony hokoloina tsara ny nono sy ny sandry mba ho mafimafy sy tsy hiroraka. Hanampy anao amin'izany ireto manaraka ireto.
Matetika mantsy ny kibo sy ny fitombenana no tena ifantohan’ny maro. Ampifandanjaina noho izany ny fikoloana ny vatana ka atao mahazo daholo ny faritra rehetra.
Fampihetseham-batana voalohany :
Mijoro mahitsy, somary asabaka hitovy tantana ny soroka ny tongotra. Tazonina amin’ny tanana roa manoloana ny tratra ny tavoahangin-drano na “haltère”iray. Alefa miankavia sy miankavanana mifandimby. Tsy mihetsika ny vatana fa ny tanana ihany no mikipily miankavia sy miankavanana. Averina in-30 izany dia manao andiany telo.
Fampihetseham-batana faharoa :
Tazonina amin’ny tanana havia ny tavoahangy dia akarina any ambonin’ny loha izany. Alefa mankany aloha avy eo toy ny hanao totohondry fa misy tavoahangy fotsiny ny tanana dia averina ampiakarina any ambonin’ny loha. Izay no averina in-30 dia mivadika amin’ny lafiny ilany. Atao haingakaingana ny fihetsika.Manao andiany 3.
Fampihetseham-batana fahatelo :
Mitazona tavoahangy na haltère iray isaky ny tanana indray eto. Somary miondrika ny tapany ambony amin’ny vatana amin’ity farany ity. Alefa miankavia sy miankavanana mifandimby ny tanana dia sintonina tsara mba hahazo tsar any lamosina, izany hoe : atsipy lavitra araka izay tratra ny tanana.
Isaorana ny coach Josy avy ao amin’ny Art Sport Fitness Andrefan’Ambohijanahary tamin’ny fiaraha-miasa. Fifandraisana : 0340399035